Miomàna fa ho avy ny Tompo
Miomana fa ho avy ny Tompo
« Ary raha niara-niangona teo aminy Jesosy, dia namepetra azy tsy hiala an'i Jerosalema, fa hiandry ny teny fikasan'ny Ray, izay efa renareo tamiko, hoy Izy; « fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano; fa ianareo kosa hatao batisa amin'ny Fanahy Masina, rehefa afaka andro vitsivitsy. « Koa izay tafangona teo dia nanontany Azy hœ: Tompoko, amin'izao va no hampodianao ny fanjakana ho amin'ny Isiraely? « Fa hoy kosa Izy taminy: Tsy anareo ny hahalala ny andro na ny fotoana izay efa notendren'ny Ray amin'ny fahefany ihany. « Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'i Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. « Ary rehefa nilaza izany Jesosy, dia nakarina Izy, raha mbola nijery izy ireo; ary nisy rahona nitondra Azy, ka tsy hitan'ny masony intsony Izy. « Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, indreo, nisy roa lahy teo anilany niakanjo akanjo fotsy, « izay nanao hœ: Ry lehilahy Galiliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? iny Jesosy Izay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo Azy niakatra ho any an-danitra. » (Asan'ny Apostoly 1:4-11)
Vanin’andro tokoa izy tsara banjinintsika, vao tsy ela isika no nanamarika izany pentekosta izany. Fa androany aho hiresaka kely amin-tsika rehetra ; mialohan’ny niakaran’i JESOSY, mialohan’ny nandrotsahany ny Fanahy Masina. Misy teny napetraky ny Tompo ao. Misy zavatra 3 tsara ho fantatsika tsara. Ary ireo zavatra 3 ireo izany no mba tiako hampatsiahivina antsika kely androany.
1) « izay nanao hœ: Ry lehilahy Galiliana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? iny Jesosy Izay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo Azy niakatra ho any an-danitra. » (Asan'ny Apostoly 1:11)
Miverina foana io an, fampatsiahivana io, ary ho an’ny tena kristianina marina an, dia miomana tsara. Izaho ry havana, tsy te hiteny hoe isika rehetra ireto dia ho any an-danitra a, tsy « possible » izany ; eny e, angamba gaga ianao hoe dia ahoana koa ary izany ? « Posssible » izany raha miomana tsara isika. Fa aza manantenantena foana kosa raha tsy miomana ianao.
Matoa anie JESOSY indray mandeha niteny hoe : « misy aminareo anie hiteny Amiko, fa tsy izy e ». Noho izany an, izaho rehefa mitory teny tsy mba mampanantena antsika mihintsy hoe, dia ho any daholo isika mianakavy e ! Fa matoa JESOSY nampitandrina tsara mihintsy an, misy ho tavela eo.
Hoy IZY : « misy roa, ny iray halaina ny iray havela », enga anie ka mba tsy ny mpivady ka tavela ao ilay iray. « Misy roalahy any an-tsaha, ny iray tavela ny iray handeha. » hoy IZY ; mety misy samy mpino eto daholo koa, ny iray handeha, ny iray tavela, mampitandrina tsara mihintsy ny Tompo. Ary mialoha an’io fihaviany io ry havana an, dia izao zavatra hitatsika izao. Aza maka alavitra anie ry havana, fa eto amin’ny firenena e, fahadisoam-panantenana andro aman’alina no hitanao eto. Ary ho diso fanantenana mihintsy ianao indray andro any, raha tsy mitandrina.
Inona indray no hivoaka rahampitso ? Ohatra ny mintaintaina izany foana ilay fiainana. Mikorontana mihintsy ny saina. Jereo tsara ny tenin’ny Tompo : « ka ho reraka ny fon'ny olona noho ny fahatahorany sy ny fiandrasany izay zavatra ho tonga ambonin'ny tany; fa ny herin'ny lanitra dia hohozongozonina.» (Lioka 21:26) sy ny MATIO 24. Raha manaraka tsara ny tantara isika ry havana, mihamafy, mihamafy ny lakolosy izao. Miomana, ireo « choc, choc » be dia be hitantsika ireo, na eto amin’ny firenena, na eran’izao tontolo izao ireo an ; ohatran’ny miha-misavoritaka, ary manomboka isam-batan’olona, isan-tokatrano, eo amin’ny fianakaviana, eo amin’ny firenena, eo amin’ny tany ama-monina, korontana ambony ambany izao ry havana. Misy « choc » izao ry havana, ary rehefa mandinika an’io aho dia ohatra ny hamafisin’ANDRIAMANITRA mihintsy ilay lakolosy hoe : mba miomana ve nareo e ? Aza gaga fotsiny hoe sarotra ny fiainana, aza gaga fotsiny hoe inona no ianteherana ? Ny anton’ireny ry havana, dia izao : mampiomana ny Tompo.
Be dia be ry havana, ny olona ohatra ny tsy tonga saina izany ! Raha miresaka fotsiny aho eto amin’ny firenetsika, ary io eran’izao tontolo izao, fa tsy eto ihany. Mihazakazaka amin’izay hahatsara ity tany ity daholo ilay olona. Hoy ny Tompo anie hoe holevonina io e ! Miazakazaka daholo, hampilamina, raha ohatra ry havana, hilamina ity izao tontolo izao ity. Diso ny baiboly. Fa ny baiboly milaza tsara fa hisy fahoriana, hisy korontana, ary ho reraka ny fon’ny maro. Izany no zavatra tsy maintsy hitranga. Ary raha hanantentena olona isika eto ambonin’ny tany ry havana, ho sahirana eto isika. Izao vanin’andro izao ry havana no tena antenaina an’i JESOSY mihintsy. Ary efa manomboka ANDRIAMANITRA, mamarana ny tantaran’ity izao tontolo izao ity. Mamarana ny tantara IZY amin’ilay hoe « gouvernement mondial » eo ambany fahefan’ilay bibidia. Ho raisin’ny bibidia ny fahefana eto ambonin’ny tany ry havana.
Ary efa manomboka io izao an, misavoritaka ary… Ny mpino tokony hahalala tsara an’izany. Ny mpanao politika aloha dia fanina fa tsy mahalala an’izany e. Fa isika kristianina tokony hahalala tsara. Efa manomboka manamboatra ny « stratégie »-ny satana amin’izao vanin’androtsika izao. Ary miasa mafy izy, na ao anaty fiangonana, eo amin’ny firenena, ao an-tokatrano.
Araho tsara ny baiboly ry havana, mba tsy ho kivy sy ho sahirana ny sainao. Fa ny fiafaran’izao korontana izao ry havana, ny fihavian’i JESOSY eny amin’ny rahon’ny lanitra. Haka ny olony, ary mbola fiandohan’ny fahoriana io an. haka ny olony an, hanavaka ny olony IZY. Izay tena olony marina. Noho izany aza variana ry havana.
« Fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arikanjely ary ny trompetran'Andriamanitra, ka izay maty ao amin i Kristy no hitsangana aloha; » (1 Tesaloniana 4:16)
Izay maty ao amin’ny Tompo aloha no hitsangana. Izany hoe raha te hitsena ny Tompo ianao an, mitazonana ny fahamasinana mandra-pikipin’ny masonao. Miady amin’ny nofo, miady amin’ny filana maloto rehetra, raha te ho faty ao amin’ny Tompo ianao, dia miady hatramin’ny farany mandra-pikipin’ny masonao. Hiady amin’ny filan’ny nofo, miady amin’ny fahafinaretan’ny nofo, miady amin’izay asan’ny nofo rehetra.
Tsy mora izany ry havana, tsy variana intsony, mikarakara ity nofo ity. Ilaina ny mikarakara vatana, fa tsy « priorité » izany ry havana, raha ho an’ny kristianina a, fa hoy ny Tompo : « Fa katsaho aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany, dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. » (Matio 6:33)
Zavatra manaraka ho azy izany. Fa avadiky ny devoly io, raha tsy manam-bola angaha afaka manompo ny Tompo e ! Raha tsy manam-bola angaha afaka mivavaka e… Avadiky ny devoly ilay « formule » ; very hevitra, fa arakaraky ny itadiavanao an’io anefa, vao mainka tsy manam-potoana hivavahana ianao. Mila mitandrina tsara isika ry havana, katsaho aloha ; ataovy tonga ao anatinao aloha JESOSY KRISTY . Ataovy tsapanao mihintsy hoe tena niady hatramin’ny farany aho, hiteny tahaka an’i Paoly manao hoe : « Efa niady ny ady tsara aho; nahatanteraka ny fihazakazahana aho; nitahiry ny finoana aho; » (2 Timoty 4:7)
Fa aza variana, marina aloha fa tsy maintsy karakaraina ny vatana, ny ankohonana… Fa eo am-pelantanan’ANDRIAMANITRA anie izany ry havana e, hoy ny Tompo : « na izay tsy angatahinareo aza omeko anareo. » rehefa tafiditra tsara ianareo. Fa aza mahamaika antsika izany ry havana, ary izany no ilaina mitandrina tsara. Dia ahoana izany ny asa aman-draharaha ? Dia ahoana izany ny fivelomana ? Faharoa daholo izany e, raha tafiditra ianao ao anatin’ilay hoe KRISTY ao anatinareo . Misokatra ho azy ny lalam-piainana e, na iza na iza ianareo no mihaino izao toriteny izao, raha mbola tsy misokatra ny lalam-piainanareo ; mbola tsy tafiditra ao anatinareo JESOSY. Izay no lazaiko anareo ; miditra anaty fiangonana ianareo, fa raha vao tonga ao JESOSY, misokatra ny lalàna mankany an-danitra. Ary rehefa tafiditra ao ianao dia omen’ny Tompo anao, na dia izay tsy nangatahinao aza. Tsy resaka hoe inona no hohaninay hoy IZY, inona no hotafianay, inona…? Izany foana mantsy ny antsika amin’izao fotoana izao. Ary mila mitandrina tsara ! Eto amin’ity fiandrasana ny fihavian’ny Tompo ity isika izao ry havana an, aza manantenantena hiakatra hoy aho, lazaiko anareo, raha tsy tena miady. Ao anaty eritreritra ao misy eritreritra maloto ao ; raha vao maloto eritreritra aloha aza manantena ny hiakatra eo, fa mavesatra be io. Misy fisainana maloto, misy toetra maloto ao anaty ao.
Araky ny nambaran’ilay mpitory teny hoe misy mijangajanga an’eritreritra. Misy mamono olona an’eritreritra anie e, fa angaha ny manatsatoka antsy ihany no mamono olona ? Raha vao mankahala fotsiny ianao, meloka. Ny ota amin’izao fotoana izao, be dia be, mila mitandrina tsara isika ry havana. Ary mila mijery tsara isika ny fitondran-tenantsika eo anatrehan’ANDRIAMANITRA.
Hoy aho taminareo hoe : mihamafy mihintsy ny olana izao, amin’izao vanin’andro iainantsika izao. Noho izany miha-mafy koa ny toriteny tsy maintsy ambara anao. Tsy azo atao hoe tambatambazana intsony ry havana ny olona amin’izao, fa hisy fahatezeran’ANDRIAMANITRA anie ry havana aorian’izao e ! Tsy ale ove mandositra izany fahatezerana izany ry havana. Na tiantsika na tsy tiantsika, misy « jugement » an’ANDRIAMANITRA anie, ry havana, ho avy e ! Izaho izay mitory teny izao, tsy maintsy hanatrika an’ANDRIAMANITRA aho, ianao izay mihaino eto koa. Mba tsy ho tonga amin’ny hoe : efa mba nihaino ihany ianao, nefa tsy nanolotra ny fiainanao. Ho avy JESOSY vonona ve isika ? Tsy vitan’ny fihetsiketsehana ivelany, ny fombafomba ivelany io ry havana, fa tena miady hatramin’ny ora farany. Asa raha mba tena tsapanao, fa tena rehefa tena manaraka ny Tompo anie ka misy anaty ao, misy ady ivelany ao. Miandry an’i JESOSY isika, ho avy tsy hoe ela tokoa IZY. Hoy ny olona hoe efa ela anie izany e ! Eny e, mety tsy izay aza no tonga aloha, fa mety ilay fahafatesana koa no tonga aloha dia ho aiza ? Mila mahazo antoka tsara ianao androany, ampidiro anatin’ny fiainanao JESOSY ry havana. Io JESOSY io an, izaho rehefa mba miresaka amin’ny olona, mpino aza noresahako amin’io an, dia tena mametra fanontaniana aho hoe, tena tafiditra ary ve ireto olona ireto fa tena ohatra ny sao dia voafitaka e ? Mila mandinika tsara isika ry havana, ho avy ny Tompo haka ny olony. Izay maty tao amin’ny Tompo aloha no hitsangana, ary rehefa avy eo izay mbola mitoetra dia miova indray mipi-maso. Mitoetra tsara, tsarovy tsara fa raha eo ampijerena fahitalavitra eo ianao no avy ny Tompo… Mijery ny « films » isankarazany, « film » gasy rehetra izao…fampihomehezana, dia mikakakaka fotsiny. Ho avy ny Tompo dia ahoana ianao ? Miomana ! Izany no tadiavin’ny Tompo aminao, iny JESOSY iny hoy izy dia ho avy indray !
Mba eny an-dalàna eny ry havana dia tokony mba miomana foana, na ao anaty « bus » mba miomana, mba mieritreritra sao dia simba ny eritreritra, ny maso sao dia avilivily ny maso, ny fihetsika sao dia misy tsy mety… Izany no fiomanana e ! Fa tsy mandeha ho azy mihintsy ry havana, raha ohatra ianao ka tena manam-paniriana ny hitsena an’ny Tompo aloha, dia izay ny fepetra. Ary matoa ny Tompo miteny an’io an, hoy aho taminao hoe : tsy ny rehetra ! Izany hitsena olo-manan-kaja izany anie ry havana tsy ny rehetra e ! Tsy misy manao kitoatoa ao, fa olona voafidy amin’izay. Fidiana amin’izay ny hitsena an’i JESOSY eny amin’ny rahon’ny lanitra. Izay tsy manam-pahamasinana, tavela. Izay manao « course » hoe hahampanan-karena eto ambonin’ny tany tavela ianao, ry havana, milaza aminao aho ! Raha ny harena eto ambonin’ny tany no iazakazahanao, ny « valeur » ety ambonin’ny tany, ho tavela ianao tena milaza aminao aho. Dia ahoana izany ? Manaraka ho azy hoy aho izany, fa tsy izany no zava-dehibe e ! Manan-karem-pahasoavana anie ity ANDRIAMANITSIKA ity e, ary izay zavatra notenen’i JESOSY tety ambonin’ny tany, hoy IZY hoe : « Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana; Izaho avy mba hananany fiainana, sady hananany be dia be. » (Jaona 10:10)
2) « Fa hahazo hery ianareo amin'ny hilatsahan'ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'i Jodia sy Samaria ary hatramin'ny faran'ny tany. » (Asan'ny Apostoly 1:8)
Eto am-piandrasana ny fihavian’ny Tompo a, misy iraka amin’izay ampanaoviny. Misy « mission ». Eto amin’izay aho vao somary miditra lalindalina angamba. Ny fanompoana an’ANDRIAMANITRA, eo mantsy matetika, mihazakazaka be dia, aleo manompo ny Tompo eto am-piandrasana e ! Jereo tsara, hoy JESOSY : « hahazo hery ianareo amin’ny hilatsahan’ny Fanahy Masina ao aminareo, ary ho vavolombeloko . » Izay no hojerentsika. Mandra-pahatonga an’io fihavian’i JESOSY io an, mila olona IZY ho vavolombelony. Tsy mitory filazantsara intsony no asainy atao an, tany aloha IZY no niteny izay, fa eto izy tsy izany intsony. Fa mila vavolombelona amin’izay JESOSY amin’izao isika izao. Izany hoe vavolombelona manaporofo fa mbola misy ny fiainana mandrakizay. Porofoina fa mbola azo ivelomana ny fanjakan’ANDRIAMANITRA. Ao anatin’ny mikorontana izao an, tena mila vavolombelona mihintsy ny Tompo hoe tena misy izany fanjakan’ANDRIAMANITRA izany. Porofo hita maso, porofo azo tsapain-tanàna, porofo tsy azo lavina ; ho vavolombeloko ianareo hoy IZY. Inona no mila vavolombelona ry havana ? Satria misy miampanga AHY fa tsy marina ny filazantsara, tsy azo ianteherana intsony ity filazantsara ity. Izany anie no mahatonga ny olona ho any amin’ny fanompoan-tsampy ry havana e. Izany anie no mahatonga ny olona handeha hanao zavatra isankarazany hoe tsy azo ianteherana intsony ity baiboly ity, izany no fiheveran’ny olona. Ary eo anatrehan’izany indrindra ry havana no tena anirahan’ny Tompo, ho vavolombeloko ianareo ; hanaporofo fa misy ny tena fiainana mandrakizay. Porofoina, hita maso. Izany anie no nahatonga ny hoe « Hianareo no epistilinay voasoratra ato am-ponay sady fantatry sy vakin'ny olona rehetra; » (2 Korintiana 3:2)
Ilay hoe vavolombelona eto an, tsy mijoro vavolombelona hoe : izaho ry havana dia mijoro vavolombelona fa nivavaka aho dia nahazo vola be aho…Tsy izany mihintsy no tian’ANDRIAMANITRA hatao fa izao, ilay fahamarinan’ny filazantsara hita maso eo amin’ny fiainanao. Io no hitsenana ny Tompo. Fa raha vavolombelona hijoroanao amin’ny harena ry havana, ny jentilisa manan-karena noho ianao, raha ny hita maso, fa ny harena tsy ananany dia ilay ato am-po. Raha hijoro vavolombelona amin’ny mpanan-karena ianao, sahiko ny mijoro vavolombelona amin’ny mpanan-karena fa izaho mbola manan-karena lavitra noho izy, ato anatiko ilay fifaliana, ilay fanantenana. Izany no ilaina amin’izao fotoan-tsika izao e ! Io tsy azo ampitahaina amin’iza na iza io, na ananany aza ilay « milliard » ry havana, hafa ilay manana ny fiainana mandrakizay ao anaty. Izany no porofoina, hita maso anie izany e, tokony ho hita amin’ny fiainantsika izany. Mivoaka miditra isika, mandeha miangona, ahoana no fomba hahitan’ny olona izany ?
« Izao no lazain'i Jehovah, Tompon'ny maro: Amin'izany andro izany dia hisy folo lahy avy amin'ny firenena samy hafa fiteny rehetra hihazona ny sisin-damban'ny Jiosy anankiray ka hanao hœ: Mba handeha hiaraka aminareo izahay; fa efa renay fa momba anareo Andriamanitra. » (Zakaria 8:23) Misintona olona ilay vavolombelon’ny fitondran-tena anie ry havana e !
Betsaka anie ry havana, ny manam-bola e, izaho izao mahita olona tena « milliardaire », tafihin’ny devoly amin’ny alina tsy mahita tory. Tena miady amin’ny devoly, misy mangalatra indray ny ary… Dia hoy aho hoe : izaho mbola manana alavitra noho ianao hoy aho dia JESOSY ato anatiko. Tena niteny izany mihintsy aho, ny ahy aloha dia tena harena sarobidy, sahiko mihintsy, ny ety ivelany angamba mety tsy itovizantsika hoy aho, fa ato anatiko tena mbola mihoatra noho ny anao mihintsy ilay harena ato anatiko.
Ny fiainana mandrakizay anie ry havana, santarina ety ambonin’ny tany e ! Ety ambonin’ny tany isika dia efa miaina ny fiadanana any an-danitra, misy santionany efa iainana ety. Fa raha any an-danitra any no mbola hitebiteby toy izao an, aleo midina indray aloha. Any an-danitra any, efa filaminana any, fifaliana, eto ambonin’ny tany izany no santarina, ilaina ny mihira mitehaka, mifaly.
Fa tena tafiditra eo amin’ny fiainanao ve ny fanjakan’ANDRIAMANITRA ? Tsapao fotsiny rehefa manana olana ianao, aiza ilay horakoraka teto ? Misy zavatra mandalo, aiza ilay fifaliana teto ? Izany no porofo fa mandalo fotsiny ny zavatra ataon’ireny tsy mpivavaka ireny matetika. Fa ao anatin’ny tena ady sarotra no tena hahatsapako fa tena manana ny fiainana mandrakizay aho e ! Ao anatin’ny tena ady mangotraka anie ry havana, no tena hahatsapako hoe tena ato amiko JESOSY e ! Na inona na inona, mikorontana ny olona, ato JESOSY mampilamina ahy.
Ianareo izao, alarobia androany, betsaka ny mahalala hoe rehefa lasa alarobia ianareo mamonjy fotoam-bavaka ; dia hifanerasera aminy ianareo rehefa avy eo. Inona no tombony ? Rehefa miresaka ve mbola ilay teo ihany no teo ? Porofoy mihintsy fa tafiditra ao anatin’ilay fiainana mandrakizay isika. Avela ho avy izay ho avy, fa manan-karem-pahasoavana ny Tompo, momba antsika isan’andro. Manana ny zavatra rehetra ny Tompo ry havana ; izaho mitory teny aminao izao anie, 43 taona no niainako niaraka tamin’izany fanjakan’ANDRIAMANITRA izany e ! Tsy resaka « théorie » izany, izaho tsy nanao « théologie » tsy nanao izany aho, fa ny fiainako isan’andro kosa nandritra ny 43 taona, noporofoiko mihintsy fa tena misy ilay mandrakizay e ! Ary azo ivelomana io, mila vavolombelona ANDRIAMANITRA ry havana.
Ny tena olan-tsika amin’izao fotoana izao, ilay mpivavaka amin’izao tsy manao vavolombelona. Miseho daholo, misy mpivavaka ary… Vao haingana mihintsy fa tena mahatsiravina, toy ny hoe misy Fanahy Masina, sy inona izany…Miresaka Fanahy Masina izy nefa ny fitondran-tena maloto. Tsy izany anie no tadiavin’ANDRIAMANITRA e, ilay fahamasinam-pitondran-tena. Io no hitsenana an’i JESOSY ; mila vavolombelona, ho vavolombeloko ianareo, io tsy moramora ry havana, ary fantatry ny Tompo tsara mihintsy. Fa raha te hiandry ny fihavian’i JESOSY ianao an, meteza ho vavolombelona. Hanaporofo fa velona JESOSY. Hanaporofo fa misy ny fanjakan’ANDRIAMANITRA. Hanaporofo fa misy ilay tena fiadanana nomen’ny Tompo.
Porofo tsy azo lavina ! Ny resaka anie ry havana mety mbola azo atao ihany hoe mandainga ianao, fa ny fitondran-tena tsy azo atao an’izany e, iza no andeha hiteny amiko fa tsy marina ny fiainako ? Ny fijoroana vavolombelona ry havana, io ilay hoe : « porofo mitohaka amin’ny tendany. » Ilay fahamiranana hita eo amin’ny fiainanao isan’andro, ary izany no tian’ANDRIAMANTIRA hapetraka. Izaho izany raha hijoro vavolombelona, aza mijoro vavolombelona amina « miracle » ety ivelany ry havana. Izaho dia toy izao… Nanana olana aho, dia ANDRIAMANITRA fa… Izany zavatra izany dia ety ambonin’ny tany izany, mbola averiko aminao ihany. Izao tontolo izao mbola manana tsara lavitra noho ianao, raha izany no entinao. Vao miteny fotsiny ianao, dia hoe izahay ary tsy mivavaka efa manana izany koa inona moa no hivakianay loha ! Fa teneno aminy kely fa ilay fiadanana ato anatin’ny foko. Mieritreritra izy, manomboka tonga sain aizy… Manana basy ianareo fa tsy mahita tory, manana aliaka be ianareo fa tsy mahita tory, manana vola be ianareo fa mitebiteby foana, fa izaho kosa milamina ny saiko rehefa matory amin’ny alina aho, rehefa mandeha eny an-dalàna aho milamina ny saiko, satria nahoana ? Ilay JESOSY ato anatiko. Ndeha mba hiaraka aminay raha te hanana ny tena fiadanana. Eo amin’i JESOSY no misy izany, tsy fikambanana, tsy fiangonana no misy izany an, fa Ilay JESOSY ILAY ANDRIAMANITRA VELONA no manome izany. Na iza na iza ianao maheno ity toriteny ity androany an, mety hijery ny fiainanareo ianareo androany, satria nentiko am-bavaka ity toriteny ity mba ho fitaratra iray hahitanareo ny fiainanareo. Dia rehefa mba hitanareo ilay maloto, dia mba hoe JESOSY a mba esory e ! Izaho ve JESOSY tena mba vavolombelona mihintsy ao amin’ny toeram-piasana ? Mba tena mijoro ve ianao ao anatin’ny toeram-piasana misy anao ?
Nividy loko tamina « quincaillerie » ngeza be izay aho, vao tsy ela akory, 25000f mg raha tsy diso aho no nomeko, ilay mpandoko niaraka tamiko, dia mbola namerenan’ilay mpivarotra vola be indray aho. Mihoatra noho ny vola nomeko azy no nomeny. Dia hoy aho tamin’ilay mpandoko, hitanao ity, andao ateritsika sy ianao any ity, naverina ilay vola, gaga be ilay mpivarotra, fa ahoana ? Izaho hoy aho nanome vola kely anao, nomenao volabe indray. Jereo tsara ny « caisse »nareo hoy aho fa raha toy izao no ataonareo ho « faillite » nareo. Dia hoy ilay mpandoko, raha izaho iny dia efa lasako iny ohatra izay ! Zavatra kely toy izany ry havana dia tian’ny Tompo ho porofoina a.
« Hoy ny tompony taminy: Tsara izany, ry mpanompo tsara sady mahatoky; nahatoky* tamin'ny kely ianao, dia hotendreko ho mpanapaka ny be; midìra amin'ny fifalian'ny tomponao.[*Na: Ry mpanompo tsara sady mahatoky, nahatoky tsara, etc] » (Matio 25:21)
Maika ianao izany fa omena vola be, sss kitapo latsaka aza. Raha sendra mahita ilay latsaka ianao, dai hoe an an an ity kosa fanomezana ity, nefa fantatrao izao ilay olona tompony. Mila olona ny Tompo e, rehefa tsy anao dia avereno ; rehefa tsy amin’ny fahamarinana aza atao ! Raha te hiandry ny fihavian’ny Tompo ianao. Eo am-panaovana hadalana eo ianao, no tonga ny Tompo, dia ho aiza ianao ? hibebaka aho rehefa avy eo ? Enga anie ka hisy fotoana hibebahana. Fa ny minitra iray tsy fantatrao anie e ! Ho vavolombeloko ianareo. Izay no tadiavin’ny Tompo, IZY tsy niteny hoe mandehana mitory ny filazantsara intsony an !
3) Rehefa niteny izany JESOSY, fantany tsara fa tsy mora izany, dia hoy IZY hoe « hahazo hery ianareo » Eo ry havana, no tena zavatra lehibe. Indray mandeha, ny mpianatra, ary anisan’ny tena mba nahavariana mihintsy.
Dia hoy i Paoly hoe : « ka nanao taminy hœ: Efa noraisinareo va ny Fanahy Masina, fony vao nino ianareo? Fa ireo nanao taminy hœ: Tsy renay akory fa efa nomena ny Fanahy Masina. » (Asan'ny Apostoly 19:2) Izaho ry havana rehefa miresaka amina mpino, dia te hametraka fanontaniana aho hoe : mba noraisinareo va ny Fanahy Masina ? Fa i Paoly eto an, dia manalasala, hoe olona manao ahoana moa izany olona nandray ny Fanahy Masina izany ? Ahoana no tena toe-pon’ny olona nandray ny Fanahy Masina ? Ahoana no tena toe-panahin’ny olona nandray ny Fanahy Masina ? Rehefa nametraka fanontaniana i Paoly, dia hoy ireo taminy : « tsy renay akory fa efa nomena ny Fanahy Masina » Dia hoy i Paoly : fa ahoana ? Raha ny marina dia hoe, fa fampianarana inona no renareo, no tsy renareo fa efa nomena ny Fanahy Masina ? Io Fanahy Masina io no hery ho entitsika mijoro ho vavolombelona. Fantatry ny Tompo tsara ry havana fa rehefa hisaraka amin’i JESOSY ny mpianatra dia handalo fotoan-tsarotra amin’izay. Tsy hitany intsony ilay JESOSY antsoiny, ary fantatr’i JESOSY tsara izany ! handeha irery ireo mpianatra ireo, eo ry havana no tena hahafantarana tsara mihintsy, rehefa mandeha irery ianao ry havana, no tena hahafantarana fa nandray ny Fanahy Masina. Rehefa ianao irery no mandeha any amin’izay toerana alehanao any. Rehefa ianao irery no manatrika ady, eo ahafantarana fa nandray ny Fanahy Masina isika. Ary mila fantatsika tsara izany zavatra izany, fantatry ny Tompo tsara, hisaraka aminy, handao azy JESOSY, hisedra fakam-panahy izy ireo, hisedra fanenjehana izy ireo, hisedra olam-piainana maro izy ireo eny an-dalàna eny, izao fotsiny no tenin’ny Tompo : « hahazo hery ianareo » Io ry havana, no hahafahan’ny tsirairay avy amintsika, hisedra amin’izay ny ady sarotra rehetra.
Misy fotoana ry havana, tena tsapako mihintsy, ary izay foana no averiko hoe : ato anatiko JESOSY misy hery mahery vaika izany tena tsy misy mahatohitra ny Fanahy ato anatiko mihintsy, tsy hahatohitra ahy ny devoly ry havana, tsy hahatohitra ny Fanahy ato anatiko ny fanahy ratsy sy ny olana…Tena omen’ny Tompo an’izany hoe « aza matahotra ianao, fa tsy hahatohitra anao mihintsy »
Ny ahatsiarovako ny tenin’i Stefana ry havana, rehefa nitory teny izy dia voalaza mihintsy hoe rehefa niteny izy dia nisy hery tsy hay tohaina mihintsy tao aminy. Misy hery ao anaty.
« Inona ary no holazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra momba antsika, iza no hahatohitra antsika? » (Romana 8:31)
Io Fanahy Masina ao anititsika io ry havana, tena manome « puissance » mihintsy io. Hiatrehana ny fakam-panahy, ny adim-piainana, ny devoly…hahazo hery ianareo, izay no nahatonga an’i Paoly nijery ireo mpianatra tany Efesosy ireo izy, jerena ny tarehiny toa kivikivy lava, miresadresaka toa hoe enjana izy ity, fa ahoana izy izany ?...Dia hoy i Paoly hoe : « efa noraisinareo ve ny FANAHY ? » dia mitovy amin’izay mihintsy ry havana, io fanontaniana io dia mbola mipetraka mihintsy amin’izao vanin’androtsika izao. Izao taon-jato iainantsika izao dia mbola mipetraka mihintsy hoe : efa noraisinao ve ny FANAHY MASINA ? Ngamba ianao hiteny hoe : ié efa nandray anie aho e ! Dia porofoy fa nandray ianao, fa hahazo hery ianareo, io tsy resaka fahaizana tenin’ANDRIAMANITRA fotsiny an, fa ny devoly koa mahay tenin’ANDRIAMANITRA, fa hery ao anaty io. Zavatra roa no itondrako anao hoe, inona no tena zavatra entin’io Fanahimasin’ANDRIAMANITRA io foana :
A) HERY AHAZOANA MANDRESY NY FAKAM-PANAHY/ HERY AHAZOANA MISEDRA NY ADIM-PIAINANA REHETRA
Izany izy io, ao anaty ao. Rehefa mandray ny Fanahimasin’ANDRIAMANITRA ny olona, jereo tsara anie Petera e, tamin’ny voalohany Petera an, mbola hafa mihintsy, fa rehefa tafiditra tsara tao aminy an, hatramin’ny fara-fofon’ainy mihintsy, tsy nitsoaka intsony izy. Ary izany no ilaina eto am-piandrasana ny Tompo ry havana. Mila izany isika, raha mbola mora resin’ny fakam-panahy ianao, misy baraingo ao ; na ianao tsy nandray, na ianao tsy mety ho fenoina ny FANAHY, ataoko hoe tsy mety fenoina, ny vava te ho feno, fa ny fo tsy mety manaiky. Ny vava te ho feno ny Fanahy Masina, fa ny fitondran-tena tsy tiana hiova.
« Normal » ianao raha hoe : fenoy ny Fanahy Masina aho Tompo ô, nefa eo ihany ny fiainana tsy miova. Fa angaha izany mety, io Fanahy Masina io ry havana tsy miditra ao anatin’ny fotsiny io, raha mbola misy fihatsarambelatsihy isika ry havana, raha mbola misy fankahalana ao anatin’ny fotsika, tsy miditra io.
B) MITONDRA NY TOETRAN’ANDRIAMANITRA
Ny Fanahimasin’ANDRIAMANITRA miditra ao anatin’ny olona, mitondra ny toetran’ANDRIAMANITRA.
« Fa hoy izaho: Mandehana araka ny Fanahy, dia tsy hahatanteraka ny filan'ny nofo ianareo. « Fa ny nofo manohitra ny Fanahy, ary ny Fanahy manohitra ny nofo; ary mifanohitra izy roroa, mba tsy hahazoanarœo manao izay zavatra tianareo. » (Galatiana 5:16-17)
Raha ao anatinareo ny Fanahimasin’ANDRIAMANITRA, tsy tia manota ianareo. Tsy minia manota ianao, mankahala ota ianao. Mitady ny fahamasinana foana ianao, izany anie no asan’ny Fanahy Masina ao anaty ry havana e ! Tsy mitsahatra, Tompo ô tempolin’ny Fanahinao ny fiainako inona no tsy mety e ? Izany anie ry havana ny olona nandray ny Fanahy Masina e ! Satria ilay Fanahin’ANDRIAMANITRA mitondra tsikelikely ilay toetran’ANDRIAMANITRA, manadio ny fisainana, manadio ny eritreritra, manadio ny fo, manadio ny ety ivelany koa…
Io Fanahy Masina io ry havana, tsarovy tsara, fa io no atao hoe JESOSY miditra ao anatitsika.
Raha ianao milaza fa nanaiky an’i JESOSY KRISTY ho Tompo amin’ny fiainanao, ny dikan’izany, miditra ao anatinao ny Fanahy Masina ; dia ahoana amin’izay ary ny toetranao manomboka eo e ?
Tafaresaka kely tamin’ny anabavy aho omaly ary tiako hozaraina eto satria tsy ho azy ihany ilay fampaherezana, fa ho antsika rehetra koa, rehefa tafiditra ao anatitsika io JESOSY io, haninona ao IZY ? Mitondra ny olantsika rehetra anie io JESOSY io e. « Nitondra ny aretintsika tokoa Izy sady nivesatra ny fahoriantsika*; kanjo isika kosa nanao azy ho nokapohina sy nasian'Andriamanitra ary nampahorina.[Heb. fanaintainantsika] » (Isaia 53:4)
Rehefa tena ory ianao, tena sahirana mihintsy, tena manana olana mihintsy, dia hoy aho hoe : aiza i JESOSY ? Inona fotsiny no antony nahafatesany teo amin’ny hazo fijaliana ? Matimaty foana ve ? Nefa raha nandray an’i JESOSY ianao, tafiditra ao anatinao IZY. IZY amin’izay no mitondra ny adinao. Fa maninona ianao no mbola mavesatra, maninona ianao no mbola mitaraina ? Maninona ianao no mbola fadiranovana ? Sao dia mbola tsy tafiditra JESOSY ry havana, izany no tokony ho jeretsika, eto am-piandrasana ny fihavian’ny Tompo isika izao an, nitondra ny aretitsika anie JESOSY e, dia ahoana no fipetrak’i JESOSY ao anatitsika ao ry havana ? Manatriaka fotoan-tsarotra isika amin’izao vanin’andro izao, dia ahoana, dia mbola mitaraina ho resy foana ve ? Dia aiza no misy an’i JESOSY amin’izany ? Aiza no misy ny Fanahimasin’ANDRIAMANITRA ? Raha tena tafiditra ao marina io JESOSY io ry havana, milaza aminareo aho, fa misinda daholo ny ady rehetra sy ny alahelo. Ny ady tsy maintsy misy, fa manokatra lalàna ny Tompo hatrany hatrany. Manao lalàna eny an-tany hay ny Tompo ! Eo amin’ny lalàn-tsarotra ny Tompo, manokatra lalàna foana, amin’ny tena manahirana, manokatra lalàna foana ny Tompo. Izany anie no asan’io Fanahimasin’ANDRIAMANITRA ao anatitsika io e ! Androany ianao ry havana, raha mihaino ity toriteny ity ; nandalo izany pantekosta ianao, nefa mbola mitaraina reraka, milaza aminao aho sao dia misy tsy mety ao. Sao dia raha ho avy JESOSY ho tavela ianao. Androany kosa IZY, raha vonona ianao an, hanova tanteraka ny fiainanao IZY androany. Hanova ny endrikao ho olona faly, mirana, manana fanantenana. Satria nahoana ? Nentin’i JESOSY avokoa ny entan-tsika rehetra ! Izany anie no fiainana kristianina e, izany ilay hoe porofo tsy azo lavina. Manoloana ny fotoan-tsarotra, aza mieritreritra hoe, ka inona no ho haninay, ho tafianay ? Anjaran’ANDRIAMANITRA no mikarakara izany fa tsy anjaranao intsony. Dia hoana ? Tsy fantatro aloha ny « solution » fa ANDRIAMANITRA manana « solution miracle » e ! Ary io tsy mila andehandehanana, izaho dia tena miteny aminao mihintsy hoe : aza mba mandehandeha any amin’ireny toerana misy « miracle » ireny ry havana. Fa ao an-tokatranonao JESOSY. Tsy andehanana alavitra io e ! Reraka fotsiny ianao handeha ho ary, ho ary… tonga any fitapitaka no betsaka, ao amin’io toerana ao anatin’ny tokatranonao io JESOSY. 43 taona hoy aho no nanaporofoiko izany ry havana, izaho mbola tsy nandeha na nifindranfindra tamin’ireny toerana ireny. Afaka mampahery anao aho amin’izao fotoana izao, mbola afaka manaporofo aho, satria maninona no afaka manao izany ? Satria izay no tari-dalàna nomen’ANDRIAMANITRA antsika. Eo amin’ny toerana izay misy anao ny Tompo. Aza mitady lavitra, tena mamporisika mihintsy aho amin’izao vanin’andro izao. Ilaina ny mihaino toriteny havia, sy havanana aloha, fantaro ny zavatra rehetra, fa aza miantehitra amin’ireny zavatra ireny mihintsy ianao, aza miankina amin’ny GBPE koa, fa GBPE anie mety ho levona koa any aoriana any e, ity anie tsy mankany an-danitra koa ity fikambanana ity e, fa ny olona no mankany an-danitra. Fa nampiasain’ANDRIAMANITRA izy mba hampahiratra ny masom-panahinao. Ampahirato ny masom-panahinareo, manoloana izao fotoan-tsarotra izao. Rehefa tafiditra ao anatitsika io Fanahy Masina io, io anie no manambara ny maha-zanak’ANDRIAMANITRA antsika e ; « Fa ianareo tsy ao amin'ny nofo, fa ao amin'ny Fanahy, raha ny Fanahin'Andriamanitra no mitœtra ao anatinareo. Fa raha misy kosa tsy manana ny Fanahin'i Kristy, dia tsy Azy izy. » (Romana 8:9) Tsy an’ANDRIAMANITRA anie ianao raha vao tsy manana ny Fanahin’ANDRIAMANITRA araky ny zavatra efa voambarako taminareo e !
« Fa izay tarihin'ny Fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. « Fa tsy nandray ny fanahim-pahandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahin'ny zanaka natsangana, izay iantsoantsika hœ: Aba, Ray ô. « Ny Fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. » (Romana 8:14-16) Io no maha zanak’ANDRIAMANITRA anao, anananao ny « droit » ao anatin’ny fanjakan’ANDRIAMANITRA. Rehefa tafiditra ao ny Fanahy Masina dia manan-jo ny ho velona, ho salama, ny hanana ny zavatra rehetra ao anatin’ny fanjakan’ANDRIAMANITRA ianao, satria tonga zanak’ANDRIAMANITRA.
Inona no zavatra asain’ANDRIAMANITRA ataotsika, izay angamba no tena zava-dehibe. Inona ary no dingana tokony hatao ? Hanoro dingana anao koa aho eto. Jereo tsara ilay tenin’i JESOSY eo hoe : « mitoera ao Jerosalema aloha » Inona ary no tokony hataontsika ry havana, manoloana izao fotoan-tsarotra iveloman-tsika izao ? Miakatra daholo, efa toy ny mitanitanina koa aza ny fiakaran’ny solika indray, hiakatra daholo ireo, ny karama tsy miakatra ! Inona no hatao ? Ampiasaina daholo ny zanaka ve, hampiasaina ny vady ve ? Izany ve no « solution » tsy « solution » izany, izany no atao hoe manary entana. Rehefa nanonja be ny ranomasina, jereo ny an’ny mpianatra, nanary entana, vao mainka iny misavoamboana be raha vao maivana anie e ! Vao maika raha vao lasa miasa any daholo ny rehetra dia tsy milamina intsony ao an-tokatrano.
« Fa miambena* ka mivavaha mandrakariva, mba hahery ianareo ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany ary hitsangana eo anatrehan'ny Zanak'olona. » (Lioka 21:36)
Izay no vaha olana : « Fa miambena* ka mivavaha mandrakariva, mba hahery ianareo« Fa miambena* ka mivavaha mandrakariva, mba hahery ianareo » « solution spirituelle » mihintsy no omen’ny Tompo eto ; io teny io an, mialoha ilay korontana be dia be ao amin’ilay LIOKA 11.
Dingana voalohany ataotsika : MIVAVAKA . Eto aho angamba dia hitarika antsika amin’ny atao hoe fivavahana ara-panahy ;
« Fa avy ny andro*, sady tonga ankehitriny, raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny Ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana; fa ny Ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahaka izany. [*Gr. ora] « Andriamanitra dia Fanahy; ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. » (Jaona 4: 23-24)
Izany hoe ilay fanahinao amin’izay no mivavaka amin’ANDRIAMANITRA FANAHY. Ahoana no hataonao amin’izany ? No ahafantarana ny olona fa mivavaka amin’ny FANAHY an, tsy miresaka afa-tsy zava-panahy amin’ ANDRIAMANITRA. Tsy mangataka, na miresaka zavatra « matériel » ny fanahy. Tsy hoe Tompo ô, izahay tsy mihinan-kanina rahampitso, Tompo ô misy trosanay… tsy mba izany ny fanahy rehefa miresaka, izay no ahafantarana hoe mivavaka amin’ny fanahy ianao. Mitady ny fanatonana an’ANDRIAMANITRA mba hahatonga an’ANDRIAMANITRA hanjaka ao anatin’ny fanahintsika. Vavaka fanoloran-tena, hahatonga ilay Fanahian’ANDRIAMANITRA hanapaka ao anatintsika. Fa tsy mivavaka mba hanafaka olana, fa raha mbola izany, tsy io no atao hoe vavaka ara-panahy. Satria raha vao afaka io an, miova koa ny vavaka ataonao.
Fa ny vavaka ara-panahy : mikatsaka ny fahamasinana, ny fahadiovana, ny fanjakan’ANDRIAMANITRA. Raha mivavaka ho an’ny vadinao ianao, mbola tsy niova fo an, ny hamonjy ny fanahiny no tadiavina, fa tsy ny hahatonga azy hiaraka aminao rehefa mivoaka, na rehefa handeha hiangona. Izay no mahamenatra, dia hoe isaky ny handeha hiangona dia izay fotsiny no antony hivavahana ho azy. Mivavaka ho an’ny zanakao koa ianao, ny hamonjy ny fanahiny fa tsy ny hahatonga azy ho ao an-tranonao ao. Azonareo tsara ve ny vavaky ny fanahy ? « Intêret spirituel » fa tsy « intêret matériel » no resahana. Izay no hahafantarana hoe mivavaka amin’ny fanahy ianao. Manomboka androany isika, miova ny fivavaka, raha mbola ny sainao no mivavaka an, tonga amin’ny hoe lany bala ianao rehefa avy eo, 5 mn dia tsy hitako intsony izay lazaina, miverina foana ny vavaka… an an an aoka aho izay ! Fa ny miresaka amin’ny fanahy an, izany adiny 1 izany toy ny 1mn, satria mifanatri-tava amin’ANDRIAMANITRA ianao. 30 andro sy 30 alina anie ny an’i Mosesy e, vetivety anie izany eo anatrehan’ANDRIAMANITRA e ! Fa raha vao ianao no maimaika mihintsy, tsy hitako intsony izay hivavahana fa tssss… mitoditodika amin’izay, izay no atao hoe mivavaka amin’ny saina. Fa ny vavaka amin’ny fanahy ry havana, tsy misy farany io. Miresaka amin’ny Tompo ianao, ny fanahinao entina eo anatrehan’ANDRIAMANITRA, tena mifandray amin’ilay fanahin’ANDRIAMANITRA mihintsy ianao. Ary mitaratra ny fanahinao IZY. Afaka manao « révision » ianao, afaka miresaka AMINY ianao, mba hahatonga anao tena hifandray amin’ANDRIAMANITRA ; ho tanteraka aminareo mihintsy ilay hoe : « Raha miray amiko ianareo, ka mitœtra ao anatinareo ny teniko, dia angataho izay tianareo na inona na inona, fa ho tonga aminareo izany. » (Jaona 15:7) Izany no katsahana ao anatin’io vavaka io ry havana. Ampitomboy ny vavaka manomboka androany an, vavaka amin’ny Fanahy. Aza miresaka« matériel » intsony ; dia ahoana izany ny olana ? « Affaire »n’ANDRIAMANITRA hoy aho io fa tsy anao. Ny anao dia izao : ataovy izay hahatonga an’i JESOSY ao anatin’ny fiainanao. Fa ho hitanao anie ny hamahan’ny Tompo tsikelikely an’ireo olana ireo e ! « Par ordre de priorité » koa no amahan’ny Tompo an’io, ianao mety maika be, ny ahy ilay izao… an an an ity aloha hoy JESOSY fa ianao aza maimaika eo ianao. Fa tsy maintsy mangataka ny Fanahimasin’ANDRIAMANITRA ianao, hitarika anao hivavaka amin’ny fanahy. Toro-lalàna atoroko anao izany rehefa manomboka hivavaka an, « tompo o ampangino ny nofo ato anatiko, ampangino ny saiko raha hivavaka aminao aho satria fohy ihany ny saiko ka tsy mahatakatra na inona na inona, tsy hahatakatra izay zavatra rehetra tokony holazaiko aho fa ampangino ny nofo ato anatiko » hoe. Ho hitanao fa rehefa tonga amin’izay ny Fanahimasin’ANDRIAMANITRA dia hiova tsikelikely ny vavaka ataonao, hidiranao amin’izany atao hoe fanatrehan’ANDRIAMANITRA. Io tsy mila hira, hoe andraso aloha hihira ilay hoe fanatrehana, tsy mila an’izany io, tsy resaka hira io, tendrena ny zava-maneno mba hiditra ilay fanatrehany, tsy izany io ry havana a ! Fanahy Masina no manampy anao hanatrika ny fanatrehan’ANDRIAMANITRA tsikelikely, izay mantsy no be dia be hoe alefa ilay hira amin’izay miakatra ny fiainam-panahy, tsy izany mihintsy io ry havana a, fihetsiketsehana ety ivelana izany ! Fa ny fahamasinana an, manatona tsikelikely ny Tompo ianao. Angaha tamin’ny an’i Mosesy nisy izany mozika izany, tany an-tendrombohitra izy, nefa dia tamy ny Tompo. Raha tena te hiditra amin’ny tena fiandrasana ny Tompo ianao, manomboka androany, ovay amin’izay ny fomba fivavaka.
« Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany: Raha misy olona ta-hanaraka Ahy, aoka izy handà ny tenany sy hitondra ny hazo fijaliany ka hanaraka Ahy. » (Matio 16:24)
MANANA FANDAVAN-TENA, raha azonao atao manaova fotoana tena raikitra amin’i JESOSY hoe izaho JESOSY isaky ny amin’ny 2 maraina mifanao fotoana AMINAO, hiresaka ny ara-panahy. Fandavan-tena izay.
Zavatra roa no natolotra anao : -VAVAKA AMIN’NY FANAHY
$1- MANANA FANDAVAN-TENA
Fa ho hitanao amin’izay ny zava-mahagaga hataon’ny Tompo ho anao aoriana kelin’izay. Ny Tompo anie hampahery antsika tsirairay avy ry havana.